ရိုးပြေပြစ်အောင် – အခွင့်အရေးသာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် | MoeMaKa Burmese News & Media
အိမ့်​ကြည်​ဖြူ - ဟယ်​လို...နိုဝင်​ဘာ
ကာတွန်း ညီထွေး - ညောင်
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၃) – ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် မှားယွင်းယူဆမှု
ရဲရင့်ဘုန်း - ကျွန်တော့်ရဲ့အချစ်ဦး - XY-ADW
K ငြိမ်းချမ်း - အညတရ သူရဲကောင်းတို့ ပုံရိပ်များ
မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် နှစ် ၄ဝ အိမ်တွင်းပုန်းခဲ့ရသူ
တည်ဘွားဦး - ကိတ်မုန့်
နှင်းဆီဖြူစာပေမှ စီစဉ်ပြီး နှင်းဆီဖြူ ရသစာပေ(၀တ္ထုတို) ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပ
စိုးရိမ် - အဘိုးအိုတေး
ဇာဝါရီ - ၂၀၁၇ မြန်မာ ရသစာပေပွဲတော်မှ အိမ်အပြန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် - ၅၅ - Aung Din
နေ၀န်းနီ (မန္တလေး) - ကျွန်​​တော်​နဲ့ အမျိုးသား​နေ့
မြန်မာ့ဂန္ထဝင်စာပေ၏ အနာဂတ် - အပိုင်း (၂)
စိုးလွင် ● ကျနော်နဲ့ ၀မ်ခ (ဟောင်း) တိုက်ပွဲ - အပိုင်း (၃)
Join 88,887 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month November 2018 (101) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ရိုးပြေပြစ်အောင် – အခွင့်အရေးသာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင်
ရိုးပြေပြစ်အောင်၊ ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၄
ယနေ့လက်ရှိတွင် မြန်မာလူမျိုးအများစုမှာ စာဖတ်အလွန်အားနည်းကြ၍ စာဖတ်ရှိန်မြှင့်တင်ရေး၊ စာမဖတ်သူ ပပျောက်ရေးစသဖြင့် လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်း၍ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လျှက်ရှိနေသည် ကို တွေ့ရသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ဘာသာရေးစာအုပ်များနှင့် အပတ်စဉ်ဂျာနယ်ထုတ်ဝေနေသူဖြစ်သည့် အတွက် စာကြည့်တိုက်များကို အလျဉ်းသင့်သလို စာအုပ်စာပေများလှူဒါန်းလျှက်ရှိရာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် စာကြည့်တိုက်များသို့ စာအုပ်များ ၊ ဂျာနယ်များလှူဒါန်းလိုသဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ရာ လက်ခံထားစရာနေရာ အခက်အခဲရှိနေ၍ လက်မခံသေးကြောင်းကြားသိရသည့်အချိန်တွင်မူ အံ့သြမင်သက်မိသည်။ လှူသည့် လူက လှူချင်သည်၊ ဖတ်မည့်လူကလည်း ဖတ်ချင်သည် ဆိုသော်လည်း အခြေအနေမပေး။ မည်သို့မည်ပုံစီမံခန့်ခွဲနေ သည်ကိုမူ စဉ်းစားမရတော့ပေ။
သို့ဖြစ်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် အခြေအနေမပေးသည့်အခါ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကြိုးစားမိပြန်သည်။ နီးစပ်ရာ စာပေရေချမ်းစင်များတွင် ဂျာနယ်များတင်ပေးခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများအတွက် စာကြည့်တိုက်များတွင် လှူဒါန်းခြင်း၊ ဆေးရုံများတွင် စာအုပ်စင်ရိုက်၍ မိမိဂျာနယ်အပြင် အခြား ဗဟုသုတ ရဖွယ် စာအုပ်စာပေများ လှူဒါန်းခြင်းကို ပြုမိပြန်သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် ကန့်ဘလူမြို့ ခုတင် (၁၀၀)ဆံ့ ဆေးရုံတွင် စာပေရေချမ်းစင်တစ်ခုရိုက်၍ လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ရာ မိတ်ဆွေ၏ ပြန်လည်ပြောပြချက်များအရ မိမိတို့ပြည်သူများ စာဖတ်မပျင်းကြပုံကိုလည်း သိရှိခဲ့ရသည်။
လက်ထောက်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာသော်ဇင်ဝင်းက `ဒီလို စီစဉ်ပေးတာ ကောင်းပါ တယ်။ လူနာစောင့်တွေ အားနေတဲ့အချိန် စာဖတ်နေကြတာတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။´ ဟု ၄င်း၏အမြင်ကိုပြောပြသည်။
ဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ကြည် (အထက်တန်းသူနာပြု)ကလည်း `ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားတဲ့အချိန်လေးပေါ့။ စာပေဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကောင်း ဆုံးမိတ်ဆွေပါ။ စာပေရေချမ်းစင် ရှိခြင်းအတွက် ကျွန်မတို့ စာဖတ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေပိုရပါတယ်။ စာဖတ် ဖြစ်တော့ ဗဟုသုတတွေ တိုးပွားလာပါတယ်။ သားသမီးတွေကိုလည်း စာဖတ်ဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းဖြစ်ပါ တယ်။´ဟု ဆိုသည်။
လူနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် မန်ကျည်းကုန်းကျေးရွာမှ ကိုလှိုင်မျိုးမင်းကလည်း `ကျွန်တော်က စာဖတ် တာဝါသနာပါ ပါတယ်။ ကိုယ်မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့နေရာဒေသတွေကို စာပေက တစ်ဆင့်သိရပါတယ်။ စာပေရေချမ်းစင်တွေကိုလည်း များများမတွေ့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပေါ့နော်။ အခု ဒီဆေးရုံမှာ လူနာလာစောင့်ရင်းနဲ့မှ တွေ့ဖူးတာ။ ၀ါသနာပါလို့ အားတဲ့အချိန်တိုင်း လာဖတ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူစည်ကားတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ စာပေရေချမ်းစင် တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။´ဟု ၎င်း၏အမြင်ကို ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ လူနာစောင့်တစ်ဦးဖြစ်သည့် အင်းလယ်ကြီးကျေးရွာမှ ကိုကျော်စိုးကလည်း `ဒီစာပေ ရေချမ်းစင်မျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်က စာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဒီလို စာပေ ရေချမ်းစင်မျိုးတွေလည်း မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေ။ စေတနာထားပြီး လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ပေးထားတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ လေ့လာရ မှတ်သားရတယ်။ လူစည်ကားတဲ့ ဆေးရုံတို့ ဘူတာရုံတို့ ကားဂိတ်တို့လို နေရာတော်တော်များမှာ စီစဉ်ပေးထားနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။´ဟုဆိုပါသည်။
မိမိ၏မိတ်ဆွေမှလည်း အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်များကို လဲလှယ်၍ တာဝန်ယူကူညီပေးလျက် ရှိရာ ၎င်း၏ ပြောပြချက်များအရ `တို့နိုင်ငံက လူတွေက စာဖတ်အားနည်းတယ်သာပြောတာပါ။ ဒီဆေးရုံမှာ တော့ လူနာစောင့်တွေကော၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကော၊ လူနာတွေကော အားပြီဆိုတာနဲ့ ဒီစာပေရေချမ်း စင်လေးကို လာကြတာပဲ။ ထိုင်စရာနေရာမရှိလို့ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ဖတ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ဆို အိပ်တောင် ဖတ်ကြတာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်။´ဟု ဆိုပြီး ထိုပုံများကိုပို့လိုက်သည်။ ခံစားလိုက်ရသည့်ခံစားချက်ကို ဖော်ပြ၍ မရနိုင် အောင်ပင်။ မိမိတတ်နိုင်သည့်ဘက်က ကူညီပေးနေရသည်ကို အားမလိုအားမရဖြစ်နေမိသည်။ ထို့ထက်ပို၍ အခြေအနေ အခွင့်အရေးများ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါမူ………….. ……….. ………… ………. …………
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံကြီးများတွင်မူ နည်းပညာတိုးတက်မှုများအရ အင်တာနက်ကိုအကျိုးရှိစွာ ထိ ရောက်စွာ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေနိုင်ကြပြီဖြစ်သဖြင့် ပုံနှိပ်မီဒီယာပင် အားနည်းလာပြီဖြစ်ကြောင်း စင်ကာပူ နိုင်ငံ SMU(Singapore Management University)မှ Director တစ်ဦးဖြစ်သူ Mr.Christopher Chow က မိမိအားပြောခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကျောင်းတွင် စာကြည့်တိုက်မှာ အလွန်သေးငယ်ပြီး ကျောင်းသားအများစုမှုာလည်း online မှသာလေ့လာကြသည်ဟုဆိုသည်။ အလွန်သေးငယ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း မိမိတို့နိုင်ငံကျောင်း စာ ကြည့်တိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်တော့ အလွန်ကြီးမားပါသည်။
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ဘာသာစကားနှင့် နည်းပညာ အခက်အခဲများကြောင့် အင်တာနက်ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးမပြုနိုင်ကြသေးသောကြောင့် ပုံနှိပ်မီဒီယာသည် တွင်ကျယ်လျှက်ရှိသော်လည်း ထုတ်ဝေသူများမှာ စာအုပ် (၁၀၀၀) ကိုပင် မနည်းကုန်အောင် ရောင်းနေရသည်ဆိုသည်မှာလည်း စဉ်းစားစရာပင်။ အကြောင်း အရင်းမှန်ကိုရှာဖွေကြည့်သော် စာအုပ်ထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည့် အရာများကိုနေ့စဉ် ရွေးချယ်မှုပြုနေရသော ကြောင့်ပင်။
စာဖတ်ခြင်းထက်အရေးကြီးသည့် စား ၀တ် နေ ရေးကိစ္စများကို ပြေလည်အောင် မိသားစုတွင် ရှိသမျှ လူကုန် ကြိုးစားရုန်းကန် နေကြရသည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် စာဖတ်ချိန်မရဖြစ်နေခြင်းမှာ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲ နိုင်မှု (Time Management ) အားနည်းနေခြင်းကြောင့်လား၊ စာဖတ်ဝါသနာအားနည်းနေကြခြင်းကြောင့်လား၊ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများ လွှမ်းမိုးနေခြင်းကြောင့်လား၊ လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သည့် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အချိန် ကုန်နေကြခြင်းကြောင့်လား၊ ဂိမ်းကစားနေကြခြင်းကြောင့်လား၊ ဘောလုံးပွဲများကြည့်၍ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် အချိန်ကုန်နေကြခြင်းကြောင့်လား၊ စာကြည့်တိုက်များနည်းပါးခြင်းကြောင့်လား၊ လားပေါင်းများစွာဖြင့် ဂျာအေး သူ့အမေ ရိုက်နေပါတော့သည်။
အကယ်၍သာ စာဖတ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးများ ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါက ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခြေ အနေများကိုလည်း မျှော်တွေးမိပါသေးသည်။ မိမိအနေဖြင့် မိမိဖန်တီးပေးလိုက်သည့် အင်မတန်သေးငယ်လှ သည့် စာပေရေချမ်းစင်ရှေ့တွင် စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုလေ့လာနေသည့် လူတစ်စုကိုမြင်မိသည့်အခါ စာဖတ်နိုင်ဖို့ အခြေအနေ အခွင့်အရေးများ ပိုမိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့သာကြိုးစားနေမိပါသည်။ တန်ဖိုးသိပါက တန်ဖိုးရှိပါသည် ဟူသည့်အတိုင်းပင် တန်ဖိုးသိသောလူများလည်း မိမိတို့နိုင်ငံတွင် အများအပြားရှိနေပါသေးကြောင်း သက်သေ ပြချက်တစ်ခုပင်။ `အခွင့်အရေးသာပေးလိုက်စမ်းပါ၊ တို့ဘက်က အဆင်သင့်ပါပဲ´ဟု ပြောခဲ့သည့် မိမိမိတ်ဆွေ တစ်ဦးကို မိမိပြန်ပြောလိုက်မိသည်ကတော့ `တိုးတက်အောင်မြင်ချင်တဲ့လူဆိုတာ အခွင့်အရေးကို စောင့် နေတတ်တဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အခွင့်အရေးကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူတတ်တဲ့လူတွေ´ဟုပင် ………….. ………. …………. ……..။
(ဓာတ်ပုံ – အကယ်ဒမစ်ဂျာနယ်၊ စာပေရေချမ်းစင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ကုတင်၁၀၀ဆန့် ဆေးရုံ)